China azu paaki T-B3936 rụpụta na Factory | TIGERNU
TIGERNU fechaa mepere emepe azu paaki
Ngwongwo na-adịgide adịgide: Akpa akpa ụlọ akwụkwọ ejiri 200D * 100D Polyester dị elu, akwa na-eguzogide mmiri na mmiri na-eguzogide ọgwụ. Portable handle na abụọ mesikwuru kpachie, adaba na arọ load.Serve gị nke ọma dị ka ọrụ office ọrụ bag, ebughibu USB Nchaji bagpack, kọleji ụmụ akwụkwọ kọleji azu paaki
Ike: Arọ: 0.73kg. Ike: 18 L. Mpụga nke mpụga: 45 * 30 * 17cm (L * H * W). Enwere ike itinye ya n'okpuru oche maka njem ụgbọ elu. Oghere laptọọpụ: jidere laptọọpụ 15.6 ″. Akpa akpa maka eji eme ihe kwa ụbọchị, ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ụlọ akwụkwọ, ọrụ, ndị njem, azụmaahịa azụmahịa, njem na onyinye dị ukwuu nye onye ọ bụla ị hụrụ n'anya. , paspọtụ wdg), akpa akpa abụọ maka karama mmiri na nche anwụ, akpa RFID zipa akpa na azụ maka ekwentị / obere akpa na ihe onwe onye. Ga-arụ ọrụ nke ọma maka ịkwaga azụmaahịa na ụlọ akwụkwọ kọleji
Njirimara: Ọdụ USB dị n'èzí nke e wuru na eriri USB nwere ike iwepụ ya mee ka akpa USB a dị mfe iji kwụọ ekwentị gị na-enweghị wepụ akụ gị. Back akpa uwe imewe ime njem azu paaki na-enye ohere ọ dabara na ibu / akpa maka mfe njem; Ubu kaadị oghere na anyanwụ iko njide imewe, adaba n'ihi na gị ugboro ugboro iji ihe; Mkpọchi mkpọchi na RFID n'akpa uwe maka ihe nche
Ọ bụkwa ezigbo laptọọpụ laptọọpụ nwere akwa elasticity padded ubu straps na ergonomic S udi imewe, nke ọma n'ubu gị ọbụlagodi mgbe ị na-eburu ibu zuru oke. Na-achọgharị azụ maka nkasi obi ọzọ. Padded laptọọpụ / mbadamba ogige iji kpuchido ngwaọrụ gị nke ọma.
Nabata ịzụ ahịa na Tigernu.
Nọmba nlereanya T-B3936
Agba: Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị
Mbukota: 30pcs / ctn
Nha: 45 * 30 * 20cm
Nke gara aga: Paaki T-B3928
Osote: Paaki T-B3933A
eji azu paaki
akpa ejiji maka ụmụ nwoke